musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » LGBTQ » Mitambo yeGay 2026: Valencia Spain Inokunda Iyo Yakakura
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • LGBTQ • nhau • Spain Kuputsa Nhau • Sports • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Valencia akazviita. Guta reSpain richagamuchira Gay Games muna 2026. Mushure memwedzi yekugadzirira uye kuratidzwa kwekupedzisira kwekutsvaga pamberi peFederation of Gay Games (FGG) vhiki ino, nhume yeValencian yakakwanisa kugutsikana nevatongi.
Mitambo yeGay chiitiko chemitambo/chivanhu icho, kubvira 1982, chinopa nharaunda inogamuchirwa yemitambo yenharaunda LGBTQ +.
Chiitiko chine kutora chikamu, kubatanidzwa, uye kusiyana-siyana semisimboti yayo yakakosha.
Kukwikwidza kwaValencia kwakapfuura vakwikwidzi Munich, Germany, neGuadalajara, Mexico, vachivavarira kuve guta rakavhurika, repasi rose, rinoremekedzwa nekusiyana, uye guta rinosanganisirwa.
Mubatanidzwa wepasi rose wasarudza mukufarira Valencia ichifunga nezvekugona kwayo kuita chiitiko chakaenzana nehukuru hwe iyo Gay Games. Izvi zvinoreva kuti komisheni yakashanyira zvivakwa zvemitambo zveguta iri panzvimbo iyi yakaona kunaka kwezvivakwa zvaro kunge zvakakwana.
Mukuwedzera, Valencia. Spain, ine kukwezva kwakasimba nekuda kwemamiriro ekunze ayo ane mazuva anopfuura 300 ekupenya kwezuva pagore, gastronomy yayo, uye tsika dzayo. Kuwanikwa uye kubatana neguta, kuzvipira kwaro mukugarisa uye nzvimbo dzakasvibira, uye pamusoro pezvose mikana yebudiriro yemunhu iyo guta rinopa kune vanhu vese zvisinei murume kana mukadzi, nyika, chimiro chemuviri, kana maitiro, zvakakosheswa zvakare.
Iyo Valencia Gay Mitambo 2026 ichaitika pakati paMay naChikumi. Chiitiko ichi chichangotora vhiki imwe chete uye chichaita makwikwi emitambo inodarika makumi matatu. Izvi zvinosanganisira mitambo yemuno yakaita semutyairi wendege weValencian, mutambo wechinyakare unokosha munhoroondo netsika dzeko, uye colpbol, mutambo wetimu, uyezve mitambo yemumvura yakaita sekufambisa chikepe, kukwasva, uye polo yeigwa pamwe nekarati. Pachave zvakare nemitambo yakaita sebasketball, beach volleyball, hockey, nhabvu, softball, uye rugby, uye dzidziso dzemunhu senge fencing, tenisi, gorofu, uye kuchovha bhasikoro, pamwe nezvitsva zvakaita se-e-mitambo uye quidditch, makwikwi anoyeuchidza nezve. Harry Potter umo vatambi vanokwikwidza nekubata mutsvairo pakati pemakumbo avo.
Chiitiko ichi, icho chichasanganisira zviitiko zvakasiyana-siyana zvetsika, chinotarisirwa kukwezva vatambi zviuru gumi nezvishanu nevashanyi vanosvika zviuru zana, zvine chekuita nehupfumi muguta rinopfuura mamirioni zana nemakumi maviri emaeuro. Nenzira iyi, Mitambo yeGay ichave chiitiko chemitambo chakakosha munharaunda yeValencian mushure meMukombe weAmerica.
Iyo Gay Games edition yakarongerwa 2022 ichaitwa muna 2023 nekuda kweCOVID kuHong Kong.